သင်၏ Mac model သည် Metal X နှင့် OS X 10.11 တွင်သဟဇာတဖြစ်မည်လား။ | ငါက Mac ပါ
iOS ကဲ့သို့ပင် OS X El Capitan ရှိ Metal သည် OpenGL စာကြည့်တိုက်များဖွင့်သောအခါသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဂရပ်ဖစ် overhead ကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးပြီးသင်၏ Mac ၏ဂရပ်ဖစ်ခွဲစိတ်စနစ်သို့အဆင့်နိမ့်လက်လှမ်းမီမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရမည်၊ ကွဲပြားသောလုပ်ဆောင်မှုများကို ၁၀ ဆမြန်သည်အထိလုပ်ဆောင်နိုင်သည် အချို့သောလုပ်ငန်းများကို CPU နှင့် GPU သို့ချခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac သည် Metal နှင့်သဟဇာတဖြစ်မဖြစ်နှင့်ဤတိုးတက်မှုအားလုံး၏အားသာချက်ကိုယူမလားဆိုတာကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိနိုင်သနည်း။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာ ပံ့ပိုးပေးလိမ့်မည်ဟု Macs ၏စာရင်း.
လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးရှင်းလင်း Mac အတွက်သတ္တု ၏စွမ်းရည်များအားသာချက်ကြာပါသည် NVIDIA, AMD နှင့် Intel မှခေတ်မီ GPU အားလုံး။ ဤသဘောမျိုးဖြင့် Apple က Metal သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ Mac များကိုအထောက်အပံ့ပေးလိမ့်မည်ဟုအတည်ပြုခဲ့သည်
အထူးသ, သတ္တုမဆိုထောကျပံ့ပေးလိမ့်မယ် 2012 နှောင်းပိုင်းတွင် Mac မော်ဒယ်Mac mini မှစ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း iMac၊ ၂၀၁၂ နှစ်လယ်ပိုင်း Mac၊ ၂၀၁၂ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် MacBook Air၊ ၁၃ လက်မနှင့် ၁၅ လက်မ MacBook Pros (Retina နှင့် Non-Retina) အပါအ ၀ င်၊ Retina display ပါဝင်သည့် ၁၂ လက်မအရွယ် MacBook အသစ်
သင့်ကွန်ပျူတာကွန်ပြူတာပုံစံကိုရှာဖွေရန်၊ သင် desktop ပေါ်ရှိဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်သို့သွားရန်> ဤ Mac အကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသည့်ရက်စွဲကိုစစ်ဆေးပါ။ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်၏ iMac မှကန့်သတ်ချက်အတိုင်းသာရောက်နေရမည်။ Apple အနေဖြင့် OpenGL rendering လုပ်ရာတွင် Metal သည် ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုမိုထိရောက်သောကြောင့် ၂၀၁၂ အကုန်တွင်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Metal သည် OpenCL ၏တွက်ချက်နိုင်စွမ်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော API တွင် OpenGL ၏ graphical power ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » OS X ကိုအယ်လ် Capitan » သင်၏ Mac သည် Metal ကို OS X El Capitan တွင်သုံးနိုင်မနိုင်စမ်းပါ
ဒံယလေက Fernandez Zamora ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သင်ကပ္ပတိန်သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ မော်ဒယ်များအထိရောက်ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ပေးနေသည်ဆိုလျှင်အထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ Metal ကို run ရန်မှာအခြားဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ iPhone နှင့် iPad နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်သည် iOS 2008 ကိုလက်ခံရရှိသော်လည်းအားလုံးတွင်သတ္တုတွင်းမရှိကြပါ။
ဒံယေလFernández Zamora ကိုပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါတယ်၊ gpu ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်မဟုတ်တော့ပေမယ့် ios version ကို update တိုင်းတိုင်းမှာမော်ဒယ်ကပိုပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ပြီး ၂ နှစ်တခါမှာပစ္စည်းတွေကစျေးပေါစရာမလိုပါဘူး။ မော်ဒယ်အသစ်ကနည်းနည်းလေးမြန်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဒီထက်ပိုပြီး mhz နှင့် android ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်
ဒါကြောင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှစ်လယ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော့် Mac mini က Metal ကနေအကျိုးမယူနိုင်တော့ဘဲ Windows Vista လောက်မြန်နေ ဦး မလား။
အခြား Mac တစ်ခုကို ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်ခေတ်နောက်ကျနေသောဂိမ်းကိုမကစားပါ။
အဲဒီမှာမင်းမှာ Macbook Pro MID 2012 XNUMX ရှိတာသိတယ်။ နှင့်သတ္တုကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်, သူကပြောတယ် !!!
ကောင်းစွာဖတ်ပါ၊ ၁၃ လက်မ MacBook Pro Retina နှင့် Retina မပါရှိပါ။ နောက်ဆုံး Retina non non သည် ၂၀၁၂ နှစ်လယ်တွင်ရှိခဲ့သဖြင့်အနားယူပါ။
ဒီ website ကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာကပြောပါတယ် http://www.macobserver.com/tmo/article/which-macs-support-os-x-el-capitans-metal
ငါဘာမှမ ၀ မ်းသာနေမိတာဘာလဲ။ ငါ့ရဲ့ imac က ၂၀၁၁ မော်ဒယ်လ်ပါ
မှတ်စုများသည် Microsoft OneNote နှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။
ကျွန်တော့် Macbook က ၁၃ လက်မ ၂၀၁၀ နှစ်လယ်လောက်မှာပေါ့။ El Capitan ကိုကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့ပြီးနှေးနေတုန်းပါ။ ငါလုပ်နိုင်တာ
သတ္တုကို El Capitan စနစ်တွင်တည်ဆောက်ထားပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီမှာတပ်ဆင်ရန်ရှိသနည်း